Semalt: SEO प्रतिस्पर्धी विश्लेषण सञ्चालन गर्न कुन उपकरणले निर्भर हुन?
एसईओ सेवा प्रदायकको रूपमा, कुनै अनलाइन व्यवसायले एसईओ एजेन्सीको सहयोग खोज्नुको आधारभूत कारण जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। यो कारण बजार मा कडा प्रतिस्पर्धा को बावजूद आफ्नो व्यापार वृद्धि गर्न आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरु लाई बाहिर पार्ने बाहेक केहि छैन। यसैले, हरेक स्वतन्त्र एसईओ प्रबन्धक वा एसईओ एजेन्सी एक प्रतिस्पर्धी विश्लेषण प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ जुन प्रतिस्पर्धीहरूको पूर्ण अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्दछ। यस्तो अध्ययनमा, एसईओ प्रदायकले बुझ्न सक्दछ कि किन प्रतिस्पर्धीहरू सही कोनिसमा महत्त्वपूर्ण भएका कुञ्जीशब्दहरूको लागि उच्च श्रेणीमा छन्। साथै, पूर्ण प्रतिस्पर्धी अनुसन्धानले प्रतियोगीहरूको पदोन्नति रणनीति ट्र्याक गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईंको ग्राहकहरूको घाँटी भित्र सास फेर्दै छ।
अन्तत: गुणात्मक प्रतिस्पर्धी अनुसन्धान प्रक्रियाले साइटको प्रबर्धनको लागि तपाइँको परिचालन कार्य योजना दिनुपर्दछ, जुन त्यस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ जहाँ तपाइँ तपाइँका ग्राहकहरूको प्रतिस्पर्धीलाई तुलनात्मक लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ।
वास्तवमा, हामी सबैलाई थाहा छ कि SEO को गहिरो ज्ञान विस्तृत प्रतिस्पर्धी अनुसन्धान गर्न पर्याप्त हुँदैन। त्यसकारण त्यसो गर्न तपाईले उत्तम एसईओ उपकरणहरू प्रयोग गर्नु पर्छ।
यस गाइडको बाँकीमा, हामी विश्लेषणमा उपकरणको उपयोगिता मात्र प्रस्तुत गर्दैनौं तर तपाईंको प्रतिस्पर्धी विश्लेषण सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्न सही उपकरण पनि प्रस्तुत गर्दछौं।
प्रतिस्पर्धी अनुसन्धान के हो र यसलाई सञ्चालन गर्नु किन महत्त्वपूर्ण छ?
साइट प्रतिस्पर्धीहरूलाई बढावा दिंदा हामी यो सँधै बिर्सनुहुन्न कि एसईओ एक प्रक्रिया हो जुन "Google" को अगाडि गरिन्छ तर विशेष गरी उहि ठाउँमा हाम्रो प्रतिस्पर्धीहरूको अगाडि। एउटा चीज गर्नको लागि, तिनीहरूको साइटको एक विस्तृत समीक्षा र तिनीहरू अनलाइन लिने कार्यहरूको पछाडि, तिनीहरूको स्थानहरूको निरन्तर अनुगमन हो।
यो बिभिन्न एसईओ उपकरणहरू प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ, तर हामी सिफारिस गर्दछौं अगली-पुस्ता उपकरणहरू जस्तै SEO समर्पित ड्यासबोर्ड ; प्रतिस्पर्धीहरूको खोजी गर्न जुन अलि बढी शक्तिशाली छ र तपाइँलाई उनीहरूको साइटहरू कसरी प्रदर्शन गरिरहेको छ भनेर व्यापक जानकारी प्रदान गर्न सक्छ - जस्तै बाह्य लिंकहरू, साइटमा कार्यहरू र अधिक।
तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूको गहन जाँचको साथ कुन जानकारी निकाल्न सकिन्छ?
राम्रो उपकरणको साथ गरिएको प्रतिस्पर्धी अनुसन्धानले तपाईंलाई तपाईंको प्रतिस्पर्धीको कामको बारेमा सकेसम्म धेरै डेटा दिनुपर्दछ।
त्यसोभए पत्ता लगाउनुहोस् कि तपाईका प्रतिस्पर्धीहरूको गहन समीक्षाको अन्तिम परिणाम के हो (हाम्रो विचारमा)।
तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूले प्रदान गर्ने सेवा
गहन प्रतिस्पर्धी अध्ययनको अन्तिम परिणामले प्रतियोगीहरूले प्रदान गरेको सेवालाई आवश्यक रूपमा ध्यानमा राख्नुपर्दछ। किनभने तपाइँ प्रतिस्पर्धीहरूले प्रस्ताव गर्ने सेवाहरूको बिभिन्न किसिमका, र विशेष रूपमा प्रतिस्पर्धीहरूले तपाइँले नगर्ने प्रस्ताव गर्ने सेवाहरू के भन्ने जान्नुपर्दछ। यो सेवाहरूको लक्षित दर्शक को हो र उनीहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न कति गाह्रो हुन्छ भनेर बुझ्न तपाईंको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यो यी सेवाहरू हो जुन तपाईंलाई अद्वितीय ज्ञान, विशेष उपकरण, पूर्वाधारमा ठूलो लगानी, आदि प्रयोग गरेर प्रदान गर्न सक्षम हुन आवश्यक पर्दछ।
यस्तो विश्लेषण गर्न, यो प्रयोग गर्न महत्त्वपूर्ण छ उन्नत SEO उपकरण जसले तपाईंलाई विस्तृत जानकारी दिन सक्छ तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूले प्रदान गर्ने सेवाको बारेमा। अन्यथा, तपाइँ कहिले पनि तपाइँको ग्राहकहरुका प्रतिस्पर्धीहरु लाई प्रदर्शन गर्न सक्षम पदोन्नति को योजना को बारे मा विस्तार को लागी सक्षम हुनु छैन।
प्रतिस्पर्धीहरू द्वारा थपिएको मान?
यो एक महत्वपूर्ण परीक्षण पनि हो जसले तपाईंलाई प्रतिस्पर्धीहरूको गतिविधिहरूमा प्रकाश पार्दछ। प्रतिस्पर्धीहरु द्वारा प्रदान गरिएको मुख्य जोडिएको मान के हो? द्रुत वितरण? राम्रो गुणस्तर उत्पादनहरू? २-घण्टा समर्थन? स्थानीय उत्पादन? विश्वसनीय उत्पादनहरू? एउटा ब्रान्ड जुन ग्राहकहरु देखाउन चाहान्छन्? वारेन्टी बढ्यो? एकचोटि तपाईंले प्रतिस्पर्धीहरू द्वारा थपिएको वास्तविक मूल्य बुझ्नुभयो भने, तपाईं तिनीहरूको पदोन्नति रणनीति, उनीहरूको प्रासंगिक कुञ्जीपाटीको छनोट, ए links्करहरूको छनौट पनि बुझ्नुहुनेछ जुन उनीहरूले लि links्कहरू मार्फत वितरण गर्न छनौट गरेका छन्, आदि।
यो जानकारी प्राप्त गर्नका लागि तपाईले प्रयोग गर्नु पर्छ एक उपकरण तपाइँको प्रतिस्पर्धी को साइटहरु मा एक धेरै गहन खोजी गर्न सक्षम छ। यस तरिकाले, तपाईले यस जानकारीको कब्जामा लिन धेरै प्रयास गर्नुपर्दैन जसले तपाईंको पदोन्नति रणनीति सेटअप गर्न तपाईंको पालोमा मद्दत गर्दछ।
प्रतियोगीहरु को लक्षित दर्शकहरु?
याद गर्नुहोस् कि राम्रो एसईओ उपकरण प्रयोग गर्नाले तपाईंलाई तपाईंको प्रतियोगीहरूका लक्षित दर्शकहरूको आवश्यक विशेषताहरू निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ। यसले तपाइँलाई जानकारी पाउन अनुमति दिन्छ:
के तिनीहरू निश्चित उमेर समूहमा छन्?
के तिनीहरू सबै पुरुष वा सबै महिलाहरू हुन्?
के मानिसहरूसँग केहि शिक्षा वा शौक छ?
के लक्षित दर्शकहरू डिजिटल र टेक्नोलोजिकल रूपमा सक्रिय छन्?
लक्षित दर्शकहरु कहाँ छ? के यो सामाजिक नेटवर्कमा छ?
लक्षित श्रोताहरूले उत्पादन वा सेवा खोजिरहेका छन् वा कम्पनीको पहलमा उनीहरूलाई मार्केट गर्न आवश्यक छ?
के लक्षित दर्शकहरू भावनाबाट बाहिर किन्छन् वा वास्तविक आवश्यकताको बाहिर?
के तिनीहरूलाई मितव्ययी वा फोहोर ठानिन्छ?
त्यस्ता जानकारीले तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूका लक्षित दर्शकहरूलाई उनीहरूको गतिविधिहरू राम्रोसँग बुझ्नको लागि बुझ्न अनुमति दिनेछ।
प्रतिस्पर्धीहरूको सामग्री रणनीति के हो?
सामग्री एक शक्तिशाली मध्यम हो जुन राम्रोसँग व्यवसायको प्रमोशन गर्न मद्दत गर्दछ जब सही रूपमा प्रयोग भयो। यस चरणमा, तपाइँले बुझ्नुपर्दछ सामग्री प्रतिस्पर्धीले के प्रतिस्पर्धी छनौट गरेको छ। यसका साथै तपाईले उदाहरणको लागि पत्ता लगाउनु पर्छ:
सामग्री कति पटक घोषित हुन्छ?
यो कत्तिको गहिरो छ?
के यो उत्पादन गर्न समर्पित प्रशिक्षण आवश्यक छ?
के यसलाई पूरा गर्न विशेष संसाधनहरू आवश्यक छ? सामग्री प्राविधिक वा कथा र काल्पनिक छ?
यो कोठामा सामग्री लेखकहरू को हुन्?
तपाईं तिनीहरूलाई कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ? तिनीहरूले कसरी आफ्नो सेवाहरू मूल्या rate्कन गर्छन्?
गुणस्तर सामग्री लेखकहरूको लागि यस ठाउँको प्रतिस्पर्धाको स्तर के हो?
यो सबै जानकारी तपाइँको एसईओ रणनीति को लागी कस्तो प्रकारको सामग्री को उपयोग गर्न को लागी मद्दत गर्दछ। तर यस चरणमा पुग्न, तपाईंलाई धेरै शक्तिशाली SEO उपकरण चाहिन्छ।
प्रतिस्पर्धीहरूको लिंक प्रोफाइल
तपाईका प्रतिस्पर्धीहरूको रणनीतिलाई चाँडै नै पछाडि पार्नका लागि, तपाइँलाई तिनीहरूको लिंक प्रोफाइल जान्नुपर्दछ। तर यो सजिलो छैन यदि तपाईंसँग गुणवत्ता उपकरण छैन। वास्तवमा, प्रतिस्पर्धीहरूले प्राप्त गरेको बाह्य लिंकहरूको प्रोफाइल जस्तो देखिन्छ भनेर बुझ्न, तपाईंलाई थाहा दिन अनुमति दिनेछ:
कति लिंकहरु आफ्नो साइट मा जाने?
ती मध्ये कतिवटा फलो-अप लि are्कहरू हुन्?
कुन साईटहरूबाट तिनीहरूले लि getting्कहरू प्राप्त गर्दैछन्?
के प्रतिस्पर्धीहरूले साईटहरूबाट लि getting्कहरू लिदैछन् जुन तपाईंले लि links्कहरू पाउँदै हुनुहुन्न?
लि of्कहरूको एन्कर पाठ के हो र यसलाई कसरी वितरण गरिन्छ?
विभिन्न खोजी उपकरणहरूमा प्रतिस्पर्धीहरूको लिंक प्रोफाइल स्कोर कसरी राम्रो हुन्छ?
प्रतिस्पर्धी साइटमा लि links्कहरू कति पटक प्राप्त हुन्छन्?
के त्यहाँ पहिलो क्रमबद्ध र दोस्रो-क्रमबद्ध प्रतिस्पर्धीहरूको लिंक प्रोफाइल बीच ठूलो भिन्नता छ?
सर्तहरू जसको लागि प्रतिस्पर्धी स्थानमा छन्
के तपाइँ प्रतिस्पर्धीलाई गुगलको पहिलो पृष्ठमा दर्जा दिईएको के तपाईंलाई थाहा छ? यस प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन यदि तपाईंसँग राम्रो प्रतिस्पर्धी विश्लेषण उपकरण छैन भने। यस्तो उपकरणले तपाईंलाई जान्न मद्दत गर्दछ:
कुन शर्तहरूको लागि तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरू Google मा राम्रा दर्जा छन्?
के यी कुञ्जी शब्दहरूले तिनीहरूलाई यातायात प्रदान गर्छन्?
के त्यहाँ सर्तहरूको संख्यामा बढ्दो प्रवृत्ति छ जुन प्रतिस्पर्धीले क्रमबद्ध गर्दैछन्?
तपाइँ र तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरू क्रमबद्ध गर्ने सामान्य वाक्यांशहरू के हुन्?
यी मध्ये कुन वाक्यांश साँच्चै सार्थक छ?
कुन वाक्यांशहरूले क्वालिटी लिड्स ल्याउँदछ र सर्फर्ससँग मात्र नभई प्रश्नहरू छन् र विषयको बारेमा थप जान्न चाहान्छन्?
प्रतिस्पर्धीहरूको अवतरण पृष्ठहरू
ल्यान्डि pages पृष्ठहरू तपाइँको वेबसाइटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बैठक पोइन्ट हुन सक्छ। त्यसकारण, तिनीहरू सफा हुनै पर्छ, स्पष्ट र अद्वितीय सन्देश हुनुपर्दछ, प्रयोगकर्तालाई कार्य गर्न प्रेरित गर्नुहोस् र ग्राहक रूपान्तरण दर यथासम्भव बढाउनुहोस्।
तपाईंको प्रतिस्पर्धी विश्लेषणको बखत, तपाईंले आफ्नो प्रतिस्पर्धीको अवतरण पृष्ठहरूको गुणस्तर पनि जाँच्नु पर्छ, अर्थात्:
ल्यान्डि page पृष्ठ फारम पूरा गर्न प्रयोगकर्ताले कति क्षेत्रहरू भर्नु पर्छ?
यी कतिवटा अनिवार्य क्षेत्रहरू हुन्?
एक्शन बाकसमा के क्याप्सन देखा पर्छ?
ल्यान्डि page पृष्ठ लोड कति छिटो हुन्छ?
तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरू परीक्षण गर्न कुन उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
अहिले सम्म तपाईले बुझ्नु भएको छ कि तपाईका ग्राहकहरु तपाईबाट के चाहान्छन् तपाईका प्रतिस्पर्धाहरुको प्रदर्शनमा सफल हुनको लागि उनीहरुको कारोबार बढाउनको लागि हो। यस अन्तमा, तिनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न वास्तविक तरिका भनेको राम्रो एसईओ उपकरण छनौट गर्नु हो। किनभने तपाईं एसईओको बारेमा कत्ति जान्नुहुन्छ, एक राम्रो उपकरण तपाईंको एसईओ एजेन्सी वा स्वतन्त्र एसईओ प्रबन्धकको रूपमा तपाईंको एसईओ मिशनको कुञ्जी हो। राम्रो एसईओ उपकरण को छनोट तपाइँको फोकस रहनु पर्छ।
त्यसोभए तपाईं कसरी राम्रो एसईओ उपकरण छनौट गर्नुहुन्छ?
हामीलाई पहिले नै थाहा छ कि बजारमा SEO प्रकारका उपकरणहरू छन्। यद्यपि यो नोट गर्नुपर्दछ कि एसईओ उपकरणको प्रदर्शन यसको उमेरमा पर्दैन, बरु यसको वास्तविकतामा एक पटकमा धेरै कार्यहरू गर्न छिटो र प्रभावकारितामा वास्तविक परिणाम दिँदै।
यसबाहेक, हालको बजारको माग र प्रतिस्पर्धाको उग्रतालाई ध्यानमा राख्दै, Semalt का विज्ञहरूले एसईओ एजेन्सी वा एसईओ प्रबन्धकलाई को माध्यमबाट अटुट समर्थन प्रदान गर्ने निर्णय गरे एसईओ ड्यासबोर्ड भनिने पछिल्लो जेनेरेसन उपकरण।
यस उपकरणको विशेष र अद्वितीय मिशन भनेको कुनै पनि एसईओ एजेन्सी वा स्वतन्त्र एसईओ प्रबन्धकलाई चुनौतीमा उत्रन र ग्राहकहरूको सेवाहरूको लागि सेवा दिन सहयोग पुर्‍याउनु हो।
Semalt को SEO ड्यासबोर्डलाई उपकरण बनाउने केहि सुविधाहरू पत्ता लगाउनुहोस्, जुन प्रत्येक SEO एजेन्सी वा फ्रीलांसरले उनीहरूको SEO मिशन पूरा गर्न आवश्यक छ।
को धेरै कार्यहरूको बावजुद समर्पित SEO ड्यासबोर्ड, यसले तपाईंलाई तपाईंको ग्राहकहरूलाई गुगल खोजीमा उनीहरूको साइटहरूको स्थानहरू देखाउँदछ। साथ साथै शीर्ष पृष्ठहरू र कुञ्जीशब्दहरू जसको लागि उनीहरू क्रमित छन्। समर्पित SEO ड्यासबोर्डले तपाईंलाई प्रतिस्पर्धाको विश्लेषण गर्न पनि अनुमति दिन्छ; सहि कोठामा मुख्य प्रतिस्पर्धीहरू पहिचान गर्नुहोस्, उनीहरूको यातायात आकर्षक कुञ्जी शब्दहरू र उनीहरूको पदोन्नति रणनीति बुझ्नुहोस्।
यस उपकरणको एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भनेको यो हो कि तपाईं आफ्नो ग्राहकको साइटको पूर्ण विश्लेषण गर्न सक्नुहुनेछ। यस सुविधाले तपाईंलाई गर्न अनुमति दिनेछ:
साइटको प्राविधिक र सामग्री अडिट;
तपाईं यी सबै गर्न सक्नुहुन्छ, समान प्लेटफर्ममा।
रिपोर्ट केन्द्र उपकरण नवीनता मा केन्द्रित छ। रिपोर्ट केन्द्र प्रयोग गरेर, तपाइँ व्यक्तिगत रूपमा तपाइँको हरेक ग्राहकहरु को लागी रिपोर्ट वितरण को तालिका बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाइँको व्यवसाय को लागी यस उपकरण को लाभहरु निर्विवाद छन्। किनकि यसले तपाईंको ग्राहकहरूलाई तपाईंको लोगो र ब्रान्ड नामको साथ पूर्ण एसईओ रिपोर्टहरू प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ।
DSD प्रशासन प्यानल पनि उपकरण को एक सुविधा हो। वास्तवमा, यो एक सबै-इन-वन प्यानल हो जसले तपाईंलाई मोनिटर गर्न अनुमति दिन्छ:
सीसा प्रबन्ध गर्नुहोस्।
तपाईलाई आवश्यक अनुसार धेरै खाताहरू सिर्जना गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, र तपाईंको टोलीको प्रत्येक सदस्यलाई पहुँच प्रदान गर्नुहोस्। आधारभूत प्यानल विकल्पहरू मानक प्याकेजमा उपलब्ध छन्।
जे होस्, यदि तपाइँ तपाइँको ग्राहक आधार विस्तार र तपाइँको नेतृत्व प्रभावी ढ manage्गले प्रबन्ध गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, लीडजेन एड-अन लाई विचार गर्नुहोस् समर्पित SEO ड्यासबोर्ड।
नि: शुल्क १--दिन परीक्षण पाउनुहोस्
१ You-दिन परीक्षण अवधिमा मानक प्याकेजमा समावेश सबै उपयोगी सेवाहरूको तपाईंसँग असीमित पहुँच हुनेछ। चाहे तपाईलाई ग्राहक सोधपुछ ट्र्याक गर्न वा सम्भावित डाटा प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ, हामीसँग तपाईलाई चाहिने सबै चीज छ। यस अवधिमा तपाईंसँग कमिट गर्नु अघि यस उपकरणको प्रदर्शनलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नको लागि समय हुनेछ।
त्यसो भए, यदि तपाईंसँग यस उपकरणको कार्यक्षमता वा कुनै अन्य चिन्ताको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने कृपया नहिचकिचाउनुहोस् हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्न।
यो सुन्न र तपाईंलाई मद्दत गर्न हामीलाई सधैं खुशी हुनेछ।